Igumbi elinobunewunewu eliphambi kwamanzi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDale
Unyaka wonke i-waterfront luxury cottage. Ichibi labucala elinentlango kunye nezindlu ezincinci. Izixhobo zale mihla zanamhlanje, indawo yomlilo yamaplanga angaphakathi & nomgodi womlilo. Ilungele abathanda ikhephu ebusika. Inamagumbi okulala ama-4 kunye negumbi eliphezulu eliphezulu kwindlu yesikhephe- inokusebenza njengegumbi lokulala lesi-5 kunye ne-futon. Indlu yesikhephe ayishushu, esi sithuba esongezelelweyo sisetyenziswa kuphela kwimozulu eshushu. Ulwandle lokuqubha lulungele abantwana abancinci. Iindlela zokuhamba intaba kufutshane eSamuel d'Champlain park kunye ne-Eau Claire gorge eyaziwayo.
> Indawo evulekileyo enjalo nokuba ngumlilo opholileyo wangaphakathi ebusika okanye uvulelwe inkwenkwezi eshushu elayitayo ebusuku, lithuba lokwenza iinkumbulo ezininzi ezihlala ixesha elide.
Lala kwi-boathouse loft kwaye uve amaza egubungele unxweme ngezantsi kwaye akujikelezile!
> Umngangatho omkhulu ojikeleze idesika uvumela ukukwazi ukuhlangana ezitulweni ngaphandle kwaye uthathe imbonakalo kunye nezandi zalo mhlaba ubukekayo wamanzi.
> Nangona ndiyidwelise ngononophelo njengokulala kwe-9 kwimozulu efudumeleyo i-cottage ingalala 12 ngokulula isebenzisa iindawo eziqhelekileyo.
> Iisilingi zeCathedral kumgangatho ophambili kunye neesilingi ezigcweleyo ezisi-8 kwigumbi elingaphantsi eligqityiweyo.
> Kukuhambo lwemizuzu engama-20 ukuya eKiosk Lake ekungeneni emantla epaki yeAlgonquin.
Kukuhambo lwemizuzu emibini ukuya kwiindledlana zokuhamba intaba kunye neefoto ops kwi-Eau Claire Gorge.
> Luhambo lwemizuzu eli-10 ukuya kwiindledlana ezininzi zokunyuka intaba eSamuel De Champlain kwipaki yePhondo.
> Kukuhambo lwemizuzu engama-25 ukuya eNorth Bay eneendawo zokutyela ezintle.
> Yimizuzu engama-20 yokuqhuba ukuya eMattawa kunye nedolophu encinci emnandi apho idibana khona imilambo yaseMattawa kunye neOttawa.
> Kukuhambo lwemizuzu engama-30 ukuya kwinduli esanda kulungiswa yokutyibilika ekhephini emantla eMattawa ebizwa ngokuba yiAntoine Mountain.
> Ukuloba okukhulu kwi-cottage e-Smith echibini lomlomo omncinci kunye ne-bass yomlomo omkhulu, i-pickerel kunye ne-pike.
> I-snowmobile "A" trail ikwimizuzu eli-15 xa uqhuba ukuya emazantsi ku-hwy 630. Thatha umzila u-A eMpuma ukuya ngaseMattawa kwaye uthathe i-A trail eNtshona ukuya ngaseBonfield. Ukusuka nokuba eMattawa okanye eBonfield kuyenzeka ukuwela umlambo iMattawa kwaye ufikelele kwiimvavanyo ezingakumbi kuMntla womlambo iMattawa.
> Iindlela zeVMUT ATV zikude ngemizuzu engama-20.
> Ukumiselwa kwesikhephe yimizuzu emibini uqhubeleka emazantsi (jika ekunene uphume kwindlela yokuqhuba) kwi-hwy 630, emva koko uthathe eyoku-1 ekunene emanzini, uqalise isikhephe imizuzu emibini uqhuba ngamanzi ubuyela kwindlwana.
> Kukho ukuphalisa ihashe kwimizuzu eli-15 kude oko kumnandi ehlotyeni nasebusika eVon Doelers Ranch. Baza kukukhokela ngehashe ukuya eTalon Lake Gorge ekwayindawo entle kakhulu-ecetyiswa kakhulu ngakumbi ebusika.
Ndiyafumaneka 24/7 ukuphendula kunye nemibuzo onokuba unayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Calvin